Tany eny Andohatapenaka-« Tsy ny CUA no hanakana ny asa efa natomboka », hoy ny M2PATE -
AccueilRaharaham-pirenenaTany eny Andohatapenaka-« Tsy ny CUA no hanakana ny asa efa natomboka », hoy ny M2PATE
Tsy mahay miaina. Raha efa tsy nahazo rariny mikasika ny famadihana ilay tany eny Andohatapenaka ho lasa fiantsonan’ny fiara voasazy (fourrière) ny teo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) dia mitady hirika ny handrodanana ilay fefy napetraky ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Fanajariana ny Tany sy ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena (M2PATE) indray izy ireo, amin’izao fotoana izao.
Raha ny vaovao mantsy, nanapa-kevitra ny hamoaka didy fandrodanana sy fanapotehina ireo fanamboarana efa mijoro eny an-toerana ny CUA. Izany hoe, ireo fefy efa najoron’ny M2PATE amin’ny fananganana ilay fotodrafitrasa fiantsonan’ny taksiborosy mihazo an’Antananarivo amin’ireo faritra maro, toa ny mihazo an’ireo faritra avaratra sy andrefana. Nilaza mantsy ny teo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra fa fanamboarana tsy ara-dalàna io ataon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany io satria tsy manana taratasy fahazoan-dalana manokana amin’ny fanorenana na “permis de construction”.
Tsy nihambahamba kosa ny minisitra eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Fanajariana ny Tany sy ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena, Narson Rafidimanana, nilaza fa “tsy ny CUA velively no hanakana ny asa efa natomboky ny minisitera”. “Tsy ny kaominina ihany koa no manome ny taratasy fahazoan-dalana amina fanamboarana fotodrafitrasa eo ambonin’ny tany mihoatra ny 1 000 m2. Avy hatrany dia ny minisitera ihany no mamoaka izany fahazoan-dalana izany. Manaraka izany, tanim-panjakana ihany koa io etsy Andohatapenaka nofefena hananganana fotodrafitrasa ho an’ny fiantsonan’ny taksiborosy io fa tsy an’ny CUA velively na izay nolazain’izy ireo fa an’ny orinasa Tiko. Tsy misy mitombina avokoa izay lazain’ny kaominina ary ny asa tsy maintsy mandroso hatrany satria ilain’ny vahoaka izany”, hoy hatrany ny minisitra Narson Rafidimanana.
Noho izany, tsy azon’ny CUA atao velively, na ho aiza izy na ho aiza, ny mamoaka didy fandravana fotodrafitrasa eo amin’io tany etsy Andohatapenaka io.
Tsy mahagaga raha misy manam-pikasana mafy hiverina eo amin’ny fitondrana hanadiovana ireo raharaha maro misokatra momba azy amin’ny resaka fanondrana na « bois de rose », fandikan-dalàna ara-bola, famotsiam-bola ary harena azo amin’ny tsy marina. ...Tohiny